Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: ကွန်ပျူတာမှာ ဂျပန်စာရိုက်ကြည့်ချင်သူ
မင်္ဂလာပါ။ ဂျပန်စာလေ့လာနေကြသော ညီ၊ ညီမငယ်များထဲမှာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ ဂျပန်စာရိုက်ကြည့်ချင်တဲ့သူ၊ ဂျပန်စာ ထည့်ချင်၊ စာရိုက် လေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူတွေ ရှိကြမှာပါ။ ဒီအတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ IME အကြောင်း မိတ်ဆက် အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ စာရှည်ရင် ဖတ်ရတာ ပျင်းမစိုးလို့ ကိုကိုနဲ့ ညီညီတို့ နှစ်ဦး စကားအချီအချ ပြောဆိုဟန်ဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ညီညီ» ကျနော့်ကွန်ပျူတာမှာ ဂျပန်စာရိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ အဲ့တာ ဂျပန်ဖောင့် ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ?
ကိုကို» いそのあわびのかたおもい အခုရေးပြတဲ့ ဂျပန်စာ မြင်ရသလား။
ညီညီ» မမြင်ဘူး။ လေးထောင့်အတုံးတုံးပဲ ပေါ်တယ်။ (*မြင်တယ်ဆို (၂) ကို ကျော်ဖတ်ပါရန်။)
ကိုကို» ဒါဆို ညီ့ စက်မှာ ဂျပန်ဖောင့် မရှိနေဘူး။ ဂျပန်ဖောင့် ထည့်ရမယ်။
ညီညီ» ဂျပန်ဖောင့် ထည့်ရင် ဂျပန်စာကော ရိုက်လို့ ရမှာလား ?
ကိုကို» ဂျပန်ဖောင့် ထည့်ရင် ဂျပန်လို ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်လို့ ရရုံပဲ ရှိမယ်။
ညီညီ» ဖတ်ရုံတင် အားမရဘူး။ ကျနော်က ဂျပန်စာပါ ရိုက်ကြည့်ချင်တာ။
ကိုကို» ဂျပန်စာ ရိုက်ချင်ရင် ဂျပန် လက်ကွက် ပါတဲ့ ဆော့ဝဲကီးဘုတ် တင်ရမယ်။
ညီညီ» ဂျပန် လက်ကွက် ဆော့ဝဲကီးဘုတ် က ဆိုင်မှာ ရောင်းသလား။
ကိုကို» ဆော့ဝဲကီးဘုတ်ကို ဆိုင်မှာ သွားဝယ်စရာ မလိုဘူး။ သူက Hardware မဟုတ်ဘူး။ ဆော့ဝဲပါ။ Input Method Editor (အတိုကောက် IME) လို့လဲ ခေါ်တယ်။ IME တင်ရင် ဆိုင်ရာ ဂျပန်ဖောင့်ပါ တက်လာမယ်။ အဲ... ဖောင့်အလှအပ ထပ်လိုချင်တာက တပြဿနာပေါ့ကွာ။
ညီညီ» ဟုတ်။ IME ကို ဆော့ဝဲကီးဘုတ် လို့ မှတ်သားလိုက်ပါပြီ။ IME က ဘာလုပ်ပေးသလဲ ?
ကိုကို» ဇော်ဂျီဖောင့်+ဇော်ဂျီကီးဘုတ်နဲ့ ဥပမာ ပေးကြည့်မယ်။ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ ညီ ရိုက်လိုက်တဲ့ စာတစ်လုံး ဥပမာ "a" ပဲ ထားပါတော့။ အလိုလို သဝေထိုး "ေ" ဖြစ်သွားတယ် မလား။ IME ဟာ ဇော်ဂျီကီးဘုတ် နဲ့ အလားတူပဲ။ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ စာလုံး "a" ကို ဂျပန်စာလုံးဘဝ ရောက်အောင် ပြောင်းလဲပေးတယ်။
ညီညီ» ဟုတ်ပါပြီ။ab cdကနေ ဂျပန်စာ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုရေးရမှာလဲ။
ကိုကို» အင်း... ဂျပန်စာ ရေးနည်း တစ်ခုခုကို သိထားဘို့ လိုမယ်။
ညီညီ» ကျနော် ရိုးမန်းဂျိ (romanji) နဲ့ ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်တယ်။ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် မှာ "ကို Zaw Min Han" , "ဆွိ" , "မောင်ပေါ်ဦး" နဲ့ "ကို နေမင်းမောင်" တို့ ရေးထားတဲ့ ဂျပန်စာသင်တန်း သင်ခန်းစာတွေ ဖတ်ဖြစ်တယ် အကို။
ကိုကို» တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဒါဆို romanji နဲ့ ရေးရုံပဲပေါ့။ ညီ့စက်မှာ IME ရှိရင် ရပြီပဲ။
ညီညီ» ကျနော့် စက်မှာ အကို ပြောတဲ့ IME တပ်မယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ။
ကိုကို» IME က ဆော့ဝဲလေ။ တပ်လို့ မရဘူး။ တင် (install) လုပ်မှ ရမယ်။
ညီညီ» ဒါဆို ကွန်ပျူတာ CD ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ရမှာလား ?
ကိုကို» ကိုယ် က ဘယ် IME ကို တင်ချင်လဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်မယ်။ ဂျပန်စာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ...
- Google ရဲ့ IME (http://www.google.com/intl/ja/ime/ ကနေ ဖရီး ဒေါင်းလုပ် ရတယ်)
- Microsoft ရဲ့ IME (ဝင်းဒိုး တင်တဲ့ ခွေ ထဲမှာ ပါတယ်)
- Microsoft ရဲ့ Office IME (Microsoft Office System 2000, 2003, 2007, 2010 ခွေ ထဲမှာ ပါတယ်)
- နောက်ပြီး Justsystems - Ichitaro ရဲ့ ATOK IME (Ichitaro တင်တဲ့ ခွေ ထဲမှာ ပါတယ်) စသဖြင့် ရှိကြတယ်။
ညီညီ» ဘယ် IME က ပိုကောင်းသလဲ ညွှန်းပေးပါ အကို။
ကိုကို» အားလုံးက သူ့ဟာသူတော့ ကောင်းကြတာပဲ။ အဓိကက တစ်ခုခုကို စွဲသုံးကြည့်ပါ။ ဒါမှ ဂျပန်စာရိုက်တာ ကျွမ်းကျင်လာမယ်။
ညီညီ» ကျနော့်မှာ လက်ရှိတင်ထားတာ ဝင်းဒိုး ဆဲဗင်းပါ။ ဝင်းဒိုးတင်တဲ့ ခွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီတော့ စက်မှာ တင်ဘို့ Microsoft ရဲ့ IME ကို ရွေးချယ်မယ်ဗျာ။
ကိုကို» ဝင်းဒိုးခွေရှိတယ်ပေါ့။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါဆို ချက်ချင်း တန်းသုံးလို့ ရပြီပဲ။
ညီညီ» ဒါထက် စကားမစပ် တစ်ခုလောက် မေးချင်တယ်။ စက်ထဲမှာ IME က တစ်ခုမက ထည့်လို့ ရပါသလား ?
ကိုကို» ကိုရီးယားစာ၊ ဂျပန်စာ နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ နောက်ပြီး မြန်မာစာပေါ့လေ။ ဒီလို ဘာသာစကား တစ်ခုမက တတ်တဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက် တလုတ်မ တစ်ယောက်အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ သူ့ အနေနဲ့ သူကိုင်တဲ့ စက်ထဲမှာ English, Myanmar, Korea, Japanese, Chinese စတဲ့ ဆော့ဝဲကီးဘုတ်တွေ အကုန် ထည့်ထားချင်မှာပဲ။ ဒါမှလည်း အလုပ်ဖြစ်မှာကိုး။ ဒီနေရာမှာ Input Language (ဘာသာစကား) နဲ့ IME (ဆော့ဝဲကီးဘုတ်) ကို ခွဲခြားမှတ်သားနော်း။ အဲ့ တလုတ်မ စက်ထဲကို ဝင်ကြည့်ရင် ဒီလို မြင်ရမှာပဲ။
- Microsoft Pinyin ABC Style Keyboard
- Changjie Keyboard
- English (United State)
- Zawgyi Keyboard Layout (Myanmar Language က မပါသေးတော့ Emglish အောက်ထဲ ထည့်ထားတယ်)
- Miscrosoft IME
- Google IME
ဒီတော့ Input Language (ဘာသာစကား) က ပေါင်း (၅) မျိုး၊ ဆော့ဝဲကီးဘုတ်က ပေါင်း (၇) ခု တင်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာက ကွန်ပျူတာ OS ထဲမှာ Input Language ဖြစ်စေ၊ IME ဖြစ်စေ တစ်ခုထက်မက တင်ထားနိုင်ပါကြောင်း။
ညီညီ» ဒီလောက်များတဲ့ ကီးဘုတ်တွေနဲ့ .. အကို့ တလုတ်မတော့ စိတ်မရှုပ်ဘူးလား မသိဘူး။ ကျနော်ဖြင့် စာရိုက်ခါနီး ဇော်ဂျီနဲ့ အင်္ဂလိပ်ပြောင်းနေရတာတောင် တခါတလေ လည်တယ်တယ်ရယ်... :)
ကိုကို» ညီကလည်း ပြောရော့မယ်။ မရှုပ်ပါဘူးကွ။ ကိုယ့်စက်ပဲ ကိုယ် ဘာကီးဘုတ်တွေ တပ်ထားလဲ သိနေရင် ပြီးတာပဲ။ နောက် ရှော့ကပ်ကီးတွေ ရှိနေသားပဲ။ ရှော့ကပ်ကီးသုံးပြီး လှမ်းရွေးလိုက်ရုံပဲဟာ။
ညီညီ» ရှော့ကပ်ကီးတွေက ဘာတွေလဲ အကို။
ကိုကို» ပန်ကာကို လည်နှုန်း အနှေးအမြန် ချိန်တဲ့ ခလုတ်လိုပဲကွ။ Rotate အလှည့်နဲ့ သွားတယ်။ ၁ ပြီးရင် ၂၊ ၂ ပြီးရင် ၃၊ ၃ ပြီးရင် ၀၊ ဝ ပြီးရင် ၁ ပေါ့။ တစ်ခါနှိပ်တကြိမ် လည်နေမယ်။
ခွဲခြား မှတ်ထားဘို့က ...
- Input Language တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းဘို့ နှိပ်ရမှာက - Alt + Shift key
- ဆော့ဝဲကီးဘုတ် တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းဘို့ နှိပ်ရမှာက - Ctrl + Shift key ဒါလေးပဲ
ညီညီ» အော် ဂလိုလား ဆော့ဝဲကီးဘုတ် တစ်ခုတည်း ရှိတဲ့ Language မှာ Ctrl + Shift key နှိပ်ကြည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ အကို။
ကိုကို» Ctrl + Shift key နှိပ်လည်း နှိပ်နှိပ်ပဲ။ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လှည့် စရာ (rotate) တခြား ဆော့ဝဲကီးဘုတ်မှ မရှိတာကိုး။
ညီညီ» အိုခေ.. ကျနော် ရှော့ကပ်ကီးတွေ အသေ မှတ်ထားလိုက်ပြီ။ ကျနော် Input Language နှစ်ခု (English, Japanese) နဲ့ ဆော့ဝဲကီးဘုတ် သုံးခု (US, Zawgyi, Japanese IME) တင်ကြည့်မယ်။
ကိုကို» အိုခေ.. ဝင်းဒိုးခွေသာ ယူလာပေတော့။
ညီညီ» ဝင်းဒိုးခွေ ဒီမှာပါ အကို။ အော်.. မေ့နေလိုက်တာ။ ကျနော် ဂျပန် Input Language တင်လိုက်ရင် ဝင်းဒိုး အသွင်အပြင်ပါ ဂျပန်စာတွေ ပြောင်းသွားမှာလား။ အဲ့တာဆို မတင်ရဲဘူးဗျ။
ကိုကို» မပြောင်းပါဘူး။ ဝင်းဒိုး အသွင်အပြင်ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဘာသာစကားနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ နည်းပညာက သတ်သတ်ပါ။ အဲ့တာကို MUI (Multilingual User Interface) လို့ ခေါ်တယ်။ Display Language ချိန်းပေးတယ်လို့လဲ ခေါ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ စောနက တလုတ်မ တင်ထားတာက English Windows7ပေမည့်၊ ဝင်းဒိုး အသွင်အပြင်ကို တရုတ်လို ကြည့်ချင်မှာပဲ။ အဲ့တာဆို သူ့အနေနဲ့ MUI (or) Display Language ထဲက Chinese ကို ရွေးထားပေးရတယ်။ ဒီလို လုပ်မှသာ English Windows7ကနေ တလုတ်ဝင်းဒိုး Windows7ဘဝ ရောက်သွားမယ်။ အင်္ဂလိပ်မက တလုတ်မိတ်ကပ်လိမ်းထားသလိုပေါ့ကွာ။ အထဲက ဝင်းဒိုးကတော့ အင်္ဂလိပ်ဝင်းဒိုး ကာနယ် ပါပဲ။
ညီညီ» IME ကိစ္စ ပြန်ဆက်ပါဦး။ ကျနော့်စက်က အင်္ဂလိပ်လို၊ ဗမာလို ရိုက်လို့ ရပြီးသား ဆိုတော့ Japanses IME တစ်ခုပဲ လိုမယ်ထင်တယ်။
ကိုကို» ဟုတ်ပါတယ်။ အခုပဲ Control Panel ထဲက Region and Language > Keyboards and Lauguages > Change Keyboards ကနေ ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။ Japanses IME တစ်ခုပဲ ထပ်ထည့်ဘို့ လိုမယ်။ ဝင်းဒိုးခွေ DVD Drive ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပေတော့။ (လိုရင် ခွေတောင်းတယ်။ စက်ထဲမှာ ကိုယ့်ထည့်လိုတဲ့ Language ရှိပြီးသားဆို မတောင်းဘူး)
ညီညီ» ကျနော် Change Keyboards နှိပ်လိုက်ပြီ။ Installed services အုပ်စု ဘေးက Add ခလုတ်ကို နှိပ်တယ်။ ပြီးတော့ Japanese (Japan) - Keyboard Microsoft IME ဆိုပြီး ရွေးပြီး အိုကေ ပေးလိုက်တယ်။ ခွေကို လှမ်းဖတ်နေသလိုပဲဗျ။ Drive က မီးလင်းနေတယ်။
ကိုကို» အင်း... ခွေကို သူ့ဘာသာ ရှာတွေ့သွားတယ်။ မတွေ့လို့မေးရင် ခွေကို ပြန်ညွှန်းပေး၇တာလည်း ကြုံဘူးတယ်။
ညီညီ» ဟော.. ပြီးသွားပြီဗျ။ Installed services အုပ်စုထဲမှာ Japanese (Japan) - Keyboard Microsoft IME ဆိုပြီး ပေါ်လာပြီ။
ကိုကို» ဒါဆို ငါ့ညီ မှန်ပါတယ်ဗျာ...။ Desktop ပေါ်က Language bar မှာလည်း Input Language နှစ်ခု မြင်နေရပြီပဲ။
ညီညီ» ကျနော် အခု Notepad ဖွင့်ပြီး နည်းနည်း ရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဗျာ။ Input Language ကို Japanese ဖြစ်အောင် ရှော့ကပ်ကီး Alt+Shift key ကို နှိပ်လိုက်မယ်။ ဟော... Language bar မှာ EN ကနေ JP ဖြစ်သွားပြီ။ JP ဘေးနားက နီနီအလုံးလေးနဲ့ ခလုတ်က ဘာလဲဗျ။
ကိုကို» EN, JP စတာတွေက Input Language ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဘေးက ခလုတ်က အခုတက်နေတဲ့ IME ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ နီနီအလုံးလေးဆိုတော့ Microsoft IME ပေါ့ကွာ။
ညီညီ» အင်.. ကျနော် "a" ရိုက်လိုက်တာ အကိုပြောသလို ပြောင်းမသွားပါလားဗျာ။
ကိုကို» IME ဘေးက ခလုတ်က Input Mode ကို ညွှန်းတယ်။ သူ ဘာပြနေလဲ ကြည့်ကြည့်ပါ။ "A" လို့ ပြနေတာ တွေ့ရမယ်။ ဒါ ညီ "a" ရိုက်ရင် "a" ထွက်မယ် လို့ ပြောတာ။ ညီက "a" ရိုက်ရင် ဘာစာလုံး ထွက်စေချင်တာလဲ ?
ညီညီ» "a" ရိုက်ရင် ဂျပန်စာလုံး "あ" ဒါမှမဟုတ် "ア" လို့ ထွက်စေချင်တာပါ အကို။
ကိုကို» ဂျပန်စာမှာ စာလုံး (၃) မျိုး ရှိတာ သိပြီးသားမလား။
ညီညီ» ဒီလောက်တော့ သိပြီးသားပါဗျ။ Hiragana, Katakana နဲ့ Kanji မလား။
ကိုကို» အင်း..ဟုတ်တယ်။ ပုံနှိပ် အက္ခရာ ဂျပန်စာလုံးတွေက Hiragana, Katakana နဲ့ Kanji အကုန်လုံး လေးထောင့်စပ်ကြတယ်။ ဒါကို Double Width လို့ခေါ်တယ်။ Double Width စာလုံးတစ်လုံးဟာ Single Width စာလုံး (abc d) နှစ်လုံးစာ နေရာယူတယ်။ ကွန်ပျူတာ ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ ယူနီတွေ ဘာတွေ မကုတ်နိုင်သေးတဲ့ ကာလမှာ Double Width Character တွေကို ရေးဘို့ အခက်အခဲ ရှိခဲ့တယ်။ တို့ဗမာတွေ Win Inwa ဖောင့်တွေ ဖန်တီးခဲ့သလိုပေါ့။ ဂျပန်တွေမှာလည်း Katakana အတွက် single width ဖောင့်ရှိတယ်။ (* ဂျပန် Family Game တွေ နင်တန်းဒိုး ဂိမ်းတွေမှာ မြင်ရတဲ့ စာလုံးတွေပေါ့ကွာ။ ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့လေ) ခုထက်ထိ အသုံးတည့်နေဆဲပဲ။ ဒီတော့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဂျပန်အက္ခရာ ပေါင်း (၄) မျိူး ရှိတယ် မှတ်ထားပါ။ Hiragana, Katakana (double-width), Katakana (Single-width) နဲ့ Kanji ပေါ့။
ညီညီ» ဟားဟား ကွန်ပျူတာ user တစ်ယောက်အတွက် သုံးလို့ရတဲ့ ဂျပန်အက္ခရာ ပေါင်း (၄) မျိူးပေါ့ ဟလား။
ကိုကို» ဒါတင် မကသေးဘူး။ စက်မှာ ဂျပန်စာသုံးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ ဂျပန်အက္ခရာ ပေါင်း (၄) မျိူး + အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ = ပေါင်း ၅ မျိုးကို ရေလဲ ရိုက်နေနိုင်တယ်။ ဒီအတွက် အဆင်ပြေအောင် ရှော့ကပ်ကီး တစ်ခုတော့ မှတ်ထားမှ ဖြစ်မယ် ညီရ။ ဂျပန်စာ IME သုံးနေသူအတွက် သီးသန့် ရှော့ကပ်ကီးပါ။ အသေ မှတ်ထားရမယ်။
ညီညီ» ဟုတ်ကဲ့။ အသေချာ မှတ်ထားပါမယ်။
ကိုကို» မှတ်ရမည့် ရှော့ကပ်ကီးက Alt + ~ ကီးပါ။ (Alt ကီးနှင့် tilde ကီး ကို တွဲနှိပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။)
ညီညီ» ~ ကီးတော့ သိတယ်ဗျ။ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်မှာ အဲ့ကီးကို Dead Key လားဘာလား မသိဘူး ခေါ်တယ်မလား။ "ဤ၊ ၍၊ ဪ၊ ၎င်း" တို့ ဘာတို့ သူနဲ့ အခြား ကီးတစ်ခုခု တွဲနှိပ်ရတယ်လေ။
ကိုကို» အစစ်ပဲ။ အဲ့ "~" နဲ့ Alt ကီးနဲ့ တွဲနှိပ်ရမှာ...။ ဘာပြောင်းလဲသွားမလဲ သိချင်ရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်။
ညီညီ» ပြောင်းတယ်။ Language Bar ပေါ်က Input Mode မှာ "A" ကနေ "あ"ကို ပြောင်းသွားပြီ။ ကျနော် အခု Notepad မှာ "a" ရိုက်လိုက်ရင် "あ" လို့ ပေါ်သွားပြီ။ Katakana နဲ့ ပေါ်ချင်ရင်ကော ဘယ်လို ရိုက်ရမှာလဲ။
ကိုကို» Alt + ~ ကီး နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Input mode နှစ်ခု (A or ဂျပန်အက္ခရာ) rotate လှည့်နေလိမ့်မယ်။ Hiragana "あ" ဖြစ်ဖြစ်၊ Katakana "ア" (or) "ｱ" ဖြစ်ဖြစ်၊ Kanji စာလုံးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရိုက်ရမှာက romanji အသံထွက်အတိုင်း "a" ပါပဲ။ (ဘယ်လောက်လွယ်လိုက်သလဲ :P) အဲ.... "a" လို့ရိုက်ရင် "あ" ရလာမယ်။ ကိုယ်တကယ်လိုချင်တာက "ア" ဆိုရင် စပိတ်ဘား (space bar) တစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပါ။ ရေးသူကို ဘာစာလုံးရေးချင်တာလဲဆိုတာ IME က ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရွေးပြီးရင် Enter Key ခေါက်ပြီး (ဒါမှမဟုတ်) စာဆက်ရိုက်ခြင်းအားဖြင့် စောနက စာလုံးကို အတည်ပြုပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ညီညီ» ဟောဗျာ။ စပိတ်ဘား (space bar) ပုတ်တာ ဘာပြုလို့ စပိတ်မခံပေးပဲ စာပြောင်းပေးရတာလဲ အကို။ နားမရှင်းဘူးဗျာ။
ကိုကို» ဒီလိုကွ ညီရ။ ဂျပန်စာမှာ space မပါရဘူး သိလား။ ရှိတော့ ရှိတယ်။ ဗမာစာနဲ့ မတူဘူး။ အလကားနေရင်း စပိတ်တွေ လျောက်မခံရဘူး။ အဲ့တော့ အားနေတဲ့ space bar ကို အက္ခရာ ပြောင်းဘို့ ကီး အဖြစ် အသုံးချလိုက်တာပဲ။ နောက်တစ်ခုက အက္ခရာက ကိုယ်ရိုက်ပြီးပြီးချင်းပဲ (စာအရှင် ဖြစ်နေတုန်းပဲ) စပိတ်ဘားပုတ်ပြီး ပြောင်းခွင့်ရှိတယ်။ အတည်ပြုပြီးသား စာအသေနောက်မှာ စပိတ်ပုတ်ရင်တော့ စပိတ်ပဲ ခံပေးမှာပဲ။
ညီညီ» အော် ဂလိုလား။ ကျနော် လက်ကျင့်ရအောင် နည်းနည်းလောက် ရိုက်ကြည့်ဦးမယ် အကို။ နောက်မှ ထပ်မေးတော့မယ်။
ကိုကို» ကောင်းပါပြီ။ ရိုက်ကြည့်လေ သိလေပဲ။ အခက်ခဲပေါ်လာရင် မှတ်ထားလေ။ ပြီးမှ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?p=219527#post219527 မှာ 16-12-2011 က တင်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ko Gyii at 2:56 PM
ကိုရီးယားဖောင့် မရှိလို့ ထပ်ထည့်ဘို့ လိုမလို
Advance Appearance က ဖောင့်စာရင်းမှာ မိမိလိုချင်တဲ...
dfsvc.exe has encounteredaproblem and needs to c...
Firefox မှာ IDM အတွက် ဆွဲချဘို့ လင့်ခလုတ် မတက်လာသော်
Myanmar-English-Czech Students Dictionary 1st Edit...